Kumandooska Somaaliya oo weeraray goob ay shir ku lahaayeen saraakiil Al-Shabaab ah | XORRIYA NEWS
Home Aqoon Guud Kumandooska Somaaliya oo weeraray goob ay shir ku lahaayeen saraakiil Al-Shabaab ah
Kumandooska Somaaliya oo weeraray goob ay shir ku lahaayeen saraakiil Al-Shabaab ah
Ciidamada Kumandoska Somaaliya ee Danab ayaa sheegay iney weerareen degaanka Carabow oo 50-km u jira degmada Bu’aale ee gobolka Jubbada dhexe halkaasoo ay ku sugnaayeen kooxda Al-shabaab.
Saraakiisha ciidamada Xoogga dalka ayaa intaas ku daray in xiliga ay weerarka qaadayeen uu degaanka Carabow shir uga socday saraakiil sare oo ka tirsan Al-shabaab , ayna weerarka qaadeen markii ay xogtaas heleen.
Taliyaha Guutada 16-aad ee Kumandoska Xoogga dalka ee Danab G/lle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin ayaa Warbaahinta qaran u sheegay in ciidanka ay cagta mariyeen goobtii uu shirku uga socday Maleeshiyada Al-shabaab ayna gaarsiiyeen khasaare culus.
G/lle Maalin ayaa xusay iney dileen saddex sarkaal oo mid ka mid ah uu kasoo jeedo dalka Maali, laguna magacaabo (Abuu Ayman).
Sidookale taliyaha ayaa tilmaamay in magacyada labada horjooge ee kale oo Soomaali ah ay dib ka soo sheegi doonaan Magacyadooda, isagoo xusay in sidoo kale ay dileen maleeshiyaad fara badan oo goobtaas ilaalo ka ahaa.